Filtrer les éléments par date : jeudi, 23 mai 2019
jeudi, 23 mai 2019 22:54
"Permis biométrique": Hampafantarina rahampitso ny endriny vaovao
Hatao ao amin'ny Centre d'immatriculation Ambohidahy-Antananarivo rahampitso zoma 24 mey 2019, atoandro, ny fampahafantarana ny "permis biométrique" vaovao.
Tamin'ny 2015 no nanomboka ny tetikasa hamadihana ny "carte grise" sy "permis" ho "biométrique". Vaky ambatolampy tamin'ny taon-dasa fa tsy manarapenitra ny vokatra nomena ny Malagasy, izay nahatsiaro ho voafitaka sy voasoloky.
Rahampitso no hahafantarana bebe kokoa ny amin'ity "permis biométrique" vaovao ity. Inona no vahaolana ho an'ireo efa nahavita ara-potoana namadika ara-dalana ho "biométrique" ny "permis".
Hatreto mbola tsy nisy resaka ny amin'ireo tompon'andraikitra nikarakara izany "carte grise" sy "permis" nolazaina fa "biométrique" izany nefa tsy izy.
jeudi, 23 mai 2019 22:42
Maintirano: Tsy nasian'i filoha Andry Rajoelina resaka ny fanamboaran-dalana
Nandalo teto an-drenivohitry ny Faritra Melaky ny filoha Andry Rajoelina. Nampanantena hanamboatra hopitaly sy EPP, CEG, lycée izy ary koa hanome helikoptera ho an'i Maintirano.
Ny lalana anefa no tena niandrasan'olona tamin'ny kabariny. Tsy tao anatin'ny lahateniny anefa ny fanamboaran-dalana, RN1 bis indrindra indrindra izay tena mampijaly ny mponina ny faharatsiany, ary fototry ny olana maro aty, na ny fandriampahalemana sy ny asan-dahalo, na ny fihariana, na ny fahasalamana.
jeudi, 23 mai 2019 22:27
Soalala: Vehivavy iray vadina kandida depiote nanao seky tsy misy anto-bola karohina
Mitentina 200 tapitrisa Ariary ny sorabola nataony tao amin'ilay seky nefa tsy nisy an'io vola io tao amin'ny kaonty tamin'ny banky rehefa nalaina ny vola.
Karohina io ramatoa io amin'izao. Raha ny loharanom-baovao dia mety nampandosirin'ilay kandida izy, mba tsy hanamaloka ny fampielezan-kevitra nataony ao amin'ny Distrikan'i Soalala, Faritra Boeny.
"Chèque sans provision" na seky tsy misy anto-bola mitentina 200 tapitrisa Ariary no anisany anenjehana azy.
jeudi, 23 mai 2019 21:47
HJRA: Fankalazana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny aretina mamany lava
Nanakalazaina androany tetsy amin'ny HJRA Anosy andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny aretina mamany lava.
Tonga nanotrona izany ireo teo anivon'ny fikambanana manerantany momba ny fahasalamana, sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana, notarihin'ny talen'ny kabinetra, ary ireo mpitsabo eo anivon'ity Hopitaly ity.
Nisy ny fitsidihina ireo trano lay izay misy an'ireo vehivavy voakasik'izany aretina mamany lava izany.
jeudi, 23 mai 2019 21:45
Baolina kitra: Manohana ny Barean'ny Madagasikara ireo orinasa lehibe
Tonga nanohana ny ekipa malagasy ny teo anivon'ny BNI Madagascar, ny Jovena, ny Canal plus ny Telma, ny Star ary ireo maro hafa, mba ho fanampiana azy ireo amin'izao dingana lehibe ataon'izy ireo izao.
jeudi, 23 mai 2019 21:22
Antenimierandoholona: Ahena ho 18 ny isan’ny Loholona
Nitondra fanitsiana ny andininy faha-7 ao amin’ny lalàna fehizoro laharana 2015-007 tamin’ny 03 martsa 2015, mamaritra ny fiasan’ny Antenimierandoholona sy ny fomba fifidianana ary ny fanendrena ireo Senatera, ny hitsivolana noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra natao tao Antsiranana ny alarobia 22 mey 2019.
Araka io fanitsiana io dia ho 18 ny isan’ny Loholona raha 63 izy ireo amin’izao fotoana izao. Fidiana ny 12 ka 2 isaky ny Faritany. Tendren'ny Filohamp-pirenana kosa ny 6 ka atolotry ny vondrona ara-toekarena sy sosialy, araka ny fahaizamanao ananany, ny 5 amin’ireo.
Mbola handalo eny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana hojerena raha tsy mifanitsaka amin’ny lalàna fototra itondrana ny tany sy ny fanjakana ity hitsivolana ity.
jeudi, 23 mai 2019 21:02
Raharaha « OTIV Boeny »: Voantso ao Ambotsirohitra ny tomponandraikitra rehetra
Havorin’ny filoha Andry Rajoelina ao Ambotsirohitra avokoa izay tomponandraikitra rehetra ao amin’ny « OTIV Boeny » hikatsaham-bahaolana manoloana ny fitarain’ireo mpikambana ny amin’ny fikatsoan’ny volan’izy ireo ao amin’ity orinasa mpampindram-bola madinika ity.
Raha ny nambara ampahibemaso teto anoloan’ny Lapan’ny tanàna Mahajanga androany dia amin’ny 4 jona 2019 io fampiantsoana io.
Andro nofaritan’ny governemanta fa tsy iasana nefa andraisan-karama ny 4 jona 2019, ho an'ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka, na ireo manaraka ny finoana silamo na tsia, araka ny tapaka tamin’ny filankevitry ny governemanta tamin’ny fiandohan'ny taona 2019.
jeudi, 23 mai 2019 12:25
Anakatona radio sy télé?
Tsy mety maka ohatra tamin'ny lasa mihitsy ve? Tsy hitako koa anie anasarotana an'izy io e, any Etats-Unis, na club basket, na choral aza manana radio, resaka gestion de fréquence fotsiny no idiran'ny mpitondra ao an-toerana, fa tsy misy manao demande izany.
Ny sekoly mamokatra mpianatra mahay électronique, dia efa manangana station, ny internet manome toky, dia youtube anaovana station, any an-trano, tsy mila fitaovana betsaka.
Isika dia be filirony te hanakatsakana ny fahalalahana hiteny, amoronana izao rehetra izao.
Tsy io fanakatonana station io ve no nampirodana ilay raika lahy iny, dia mbola nitohy ny fandorana ilay station iray, dia nogejaina indray ilay an'ilay raikalahy iny, dé zay hatrany ve?
jeudi, 23 mai 2019 12:24
Eo am-piandrasana ny Filoha.
jeudi, 23 mai 2019 12:10
Boriborintany faha II: Hiady ny hisian'ny Lycée mpanjakana i Rastany
Aty amin'ny Boriborintany faha II, dia misy EPP, misy CEG, misy Oniversité, hoy i Randrianarisoa Stanislas na Rastany, kandida narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara - K25, mitondra ny laharana faha 9 amin'ny bileta tokana, nefa dia tsy misy Lycée-mpanjakana.
Ka anisan'ny vina entintsika, hoy Rastany ny fanofanana ny tanora, ny fampianarana, ka dia hiadivantsika ny hisian'ny Lycée ety amin'ny Boriborintany faha II.